Iingxaki zokufaka kunye nokuhambisa iiprojekthi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuqala iprojekthi kusetyenziswa ujongano yimpazamo
Mva nje ndizifumene ndisebenza kwiprojekthi efuna Yila kwakhona iapp kwaye injongo yayi yiza noyilo ngoku Kwaye kukuba ukuqala andibonanga ngxaki kwaye ndaya kwikhompyuter yam ukuqala ukuzoba.
Kodwa kancinci kancinci kwaye ngokuhamba kwexesha, ubuthathaka kunye neengxaki zokusetyenziswa Babebonakala kwaye bandothusa ngoba khange ndikulindele nakweyiphi na loo nto, ndizifumene ndisebenzisa ubume obunye kuphela ngokubeka inkangeleko entsha.
1 Uyiqala njani iprojekthi elungileyo kwasekuqaleni
2 Ujongano yinto yokugqibela ekufuneka yenziwe kwiprojekthi
Uyiqala njani iprojekthi elungileyo kwasekuqaleni
Yayinjalo ke indlela Ndifunde esona sifundo sikhulu kwikhondo lam lokuba ngumyili, le yayiyiprojekthi eyayine-as zijolise ekuphuculeni inkangelekoKodwa wayemiselwe ukusilela.
UJese james garret igcisa lokwakha elidumileyo uzuze udumo kwihlabathi elikhulu loyilo xa uqala umzobo wezinto zamava omsebenzisi, oku kungumzobo ichaza onke amanqanaba oyilo unayo kwaye ufuna imveliso yedijithali, kodwa uyenza ngocwangco kwaye ugxile ngakumbi kwi amava kunye nentuthuzelo umsebenzisi.
Inyathelo lokuqala ngu la estrategia, lo ngumzuzu apho siqala ukuchaza zithini iinjongo zenkampani kwaye zithini iinjongo zomsebenzisi, oko kukuthi, ifuna ukuzama ukuphendula umbuzo othi Zeziphi iingxaki esizama ukuzilungisa kwaye abanye balindele ntoni kwimveliso yethu entsha?
Inyathelo lesibini yile fikelela, ngulo mzuzu apho kufuneka wazi iimpawu eziza kuphuhliswa, apha Isicwangciso siphuhliswa ngokusekwe kwinto efunwa ngumsebenzisi kunye neemfuno kwaye imveliso inokubanika ntoni. Emva koko kuza ifayile ye- isakhiwoEli linqanaba lombutho apho baqala ukucinga iimpawu kunye neenkcukacha eziza kubakho xa zilungile, ngulo mzuzu apho ziya khona ukwabela onke amaphepha kwidilesi okanye kwindlela abasebenzisi abaya ngayo Izikrini zesicelo.
Ilandelwa ngu ithambo Kukufezekiswa kwemizobo kwimveliso, nantsi indlela iya kusetyenziswa ukubonisa umsebenzisi zonke izinto ezinikezelwa yile mveliso. Emva koko iya kumphezulu, lo ngumzuzu apho imeko yemveliso sele ichaziwe, uqala ukucinga ngemibala, izithuba, iifonti, izinto kunye nezitayile ukufezekisa ukuvumelana.
Eli linqanaba apho sinokuqonda khona ukuba iprojekthi yethu ilungiselelwe kakuhle kwaye ukuba yonke into iphawuleka kwinjongo yokuphucula amava omsebenzisi.
Ujongano yinto yokugqibela ekufuneka yenziwe kwiprojekthi
Incinci Kunzima ukuqonda inyathelo lokugqibela, kodwa injongo kukuqaqambisa indlela umsebenzi ojongane ngayo yinxalenye yokugqibela yeprojekthi, ndiyakubalaselisa oku kuba abantu abaninzi benza iimpazamo kule ndawo, kuba bayayidlulisa okanye bayisebenzise ngokuchanekileyo. Ukuba ufumanisa ukuba usebenza kwinkampani kubalulekile ukwazisa abanye ngezigqibo ukwenza enye Ulawulo lwemvelisoUmzekelo, kunokwenzeka ukuba umntu angawaqondi la manyathelo kwaye umyili akakuqondi ukubaluleka koku.
Emva kwenkqubo sinokuthi siqaphele ukuba ayicacanga, oku kuthetha ukuba xa siphakamisa iimfuno zomsebenzisi, ziya kutshintsha ekuhambeni kwexesha kunye neenjongo ezinemveliso yethu ekufuneka ziguquke neemfuno kunye ucwangciso loshishino, baya kusisa kumanyathelo asisiseko apho siza kuqala khona ukwenza imveliso.
Umxholo ubanzi kakhulu, kodwa oku yingcaciso nje emfutshane esivumela ukuba sizifumane kancinci, eli inqaku elinokusetyenziselwa ukuzikhuthaza ukuqala incoko neqela kwaye Qonda kancinci malunga nokubaluleka kwenqanaba ngalinye ezingaphambi kokufezekisa imbonakalo imveliso eya kuba nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuqala iprojekthi kusetyenziswa ujongano yimpazamo
Ewe, ndiyavuma, kwaye ndicinga ukuba le odolo okanye enye inokusetyenziswa xa usenza iprojekthi entsha, nokuba yeywebhusayithi, ipotifoliyo, incwadana, iflaya, njl., Enesakhiwo esisekwe kwimibuzo ethile ( into efana nokuzala).
Iposti entle kakhulu
Iindlela zokuyila zango-2017
I-InDesign: Uyilawula njani imisebenzi yangasemva